Ndị na -ebubata akpa nzacha & ụlọ nrụpụta - ndị na -emepụta akpa akpa China
Nkenke Filtration na -arụpụta ahịrị zuru oke nke akpa nzacha dị elu. Akpa nzacha ndị a dị irè na ngwa ebe achọrọ nrụpụta nzacha dị elu. Akpa ncha niile na -arụ ọrụ nke ọma dị n'ụdị dịgasị iche iche iji dabara ụlọ ụlọ nzacha nzacha nkịtị. Enwere ike imepụta akpa nzacha akwa arụmọrụ oke.
Akpa nyocha AGF
Akpa nzacha LCR-100
Precision Filtration na -arụpụta ahịrị akpa akpa nzacha mmanụ iji wepu mmetọ mmanụ na mmiri iyi. Akpa ndị ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na mmiri, ink, agba (gụnyere sistemụ E-Coat), yana usoro mmiri ndị ọzọ. Akpa nzacha adsorption mmanụ niile dị n'ụdị dịgasị iche iche iji dabara ụlọ ụlọ nzacha nzacha nkịtị. Enwere ike mepụta akpa nzacha nzacha mmanụ mmanụ.
Akpa nzacha LCR-500
Akpa nzacha nylon
Precision Filtration na -arụpụta ahịrị akpa nzacha zuru oke maka ụlọ ọrụ nzacha mmiri mmiri. Akpa akpa nha dị ka ọ dabara dabara ọtụtụ akpa akpa nzacha n'ahịa. Enwekwara ike imepụta akpa nzacha omenala maka nkọwa ndị ahịa.
Akpa nzacha PGF